खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका दाताराम नेपाल संक्षिप्त चिनारी-Setoghar
खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका दाताराम नेपाल संक्षिप्त चिनारी
दाताराम नेपाल, प्रशिक्षक सञ्चालक, फिनिक्स फुट्सल, तारकेश्वर
वि.सं. २०४८ साल देखि काठमाडौं फुटबल मार्फत खेलकुदको क्षेत्रमा करियर शुरु गर्नुभएका दाताराम नेपाल नक्साल युवा मण्डल, सानो गौचरन टिम, आरसिटी हुँदै २०५० मा महेन्द्र पुलिस क्लबमा प्रवेश गर्नुभयो । महेन्द्र पुलिस क्लब हुँदै अघी बढेको ऊहाँको यात्रा विदेश सम्म पनि पुग्यो ।
२०५० भन्दा पछाडि विद्यालय तहमा नै रहेर खेलकुद क्षेत्रमा संलग्न रहनुभएका ऊहाँ नुवाकोटबाट सानै उमेरमा काठमाडौं आएपश्चात् होस्टेलमा रहेर अध्ययन गर्नुभएको हो । शान्ति विद्या गृहबाट एस.एल.सी र पशुपति बहुमुखी क्याम्पसबाट अर्थशास्त्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नुभएका नेपालले उक्त समयमा आफुलाई आवश्यक रकम आफैंले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसै नै ऊहाँ अघी बढनुभयो ।
जागिरेको रुपमा खेलकुदको क्षेत्रमा अघी बढेको नेपालको यात्रा करिब ९ बर्ष निरन्तर रुपमा चल्यो । नेपालको अलावा विदेशमा समेत खेल्ने मौका मिलेको भएपनि पछि भने खेलकुद क्षेत्रमा भन्दा अन्य क्षेत्रबाट नै राम्रो गर्न सकिने मनसाय पलाएसँगै नेपाल पुलिसको जागिर छोडेर क्यासिनो क्षेत्रमा जोडिन पुग्नुभयो ऊहाँ । त्यस समयमा पुलिसको जागिर भन्दा क्यासिनोको जागिरको तलब समेत निकै बढी हुने गरेको नेपाल सम्झनुहुन्छ ।
नेपालमा लामो समय (करिब ६ बर्ष याक एण्ड यति अन्तरगत रोयल क्यासिनो)मा काम गर्नुभएका दाताराम नेपाल पछि सिसिटिभि सर्भिलेन्सको निम्ति मकाउ प्रवेश गर्नुभयो । मकाउमा जाने अवसर मिलेसँगै ऊहाँले करिब ४ बर्ष बिताउनुभयो ।
हाल ४४ बर्षका दाताराम नेपाल करिब ६ बर्ष पहिले नेपालमा फर्केसँगै भेनस क्यासिनोमा समेत जोडिएर जागिर गर्नुभयो । नेपालमा रहेर काम गर्ने क्रममा वीरगञ्जमा मिनी क्यासिनो समेत सञ्चालन गर्नुभएका नेपालले अहिले भन्दा ४ बर्ष पहिले शुरु गरेको मिनी क्यासिनो करिब डेढ बर्ष सञ्चालन पश्चात् बन्द भयो । त्यस सँगै ऊहाँ उक्त क्षेत्रबाट समेत बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो ।
नेपालमा नयाँ क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले अघी बढिरहनुभएका नेपाल लामो समय देखि आफूले देखेको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सफल भएकोमा गौरवान्वित महसुस गर्नुहुन्छ ।
खेलकुद क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको अनुभव ः
२०४८ मा खेलकुद क्षेत्रमा रहेर काम शुरु गर्ने समयमा नेपालमा खेलकुदको निम्ति आवश्यक पर्ने सामाग्री तथा उपकरणहरु किन्न समेत तलब अपुग हुने अवस्था थियो । १४ रकम सय पुलिसको जागिरबाट आउने तर बुट किन्न मात्रै २२÷२५ सय पर्ने अवस्था थियो । तर अहिले भने नेपालमा खेलाडीले राम्रो पारिश्रमिक पाउने अवस्था सृजना भएको छ । तर खेलकुदको निम्ति आवश्यक उपकरणको मुल्यमा भने खासै फरक छैन । तर पारिश्रमिकमा भने निकै नै वृद्धि भएको छ । यसबाट नेपालमा नै खेलकुद क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने क्रममा अवस्था निकै नै राम्रो भएको छ । अहिले खेलकुद क्षेत्रबाट सम्बन्धित खेलाडीको अवस्था अनुसार खेलाडीले पाउने तलब २०, २५ हजार देखि ४० हजार सम्म छ । साथै नेपालमा खेलाडीहरुलाई राज्य पक्षबाट समेत विभिन्न उपकरणहरु उपलब्ध गराउने काम हुँदै आएको छ । यसबाट खेलाडीहरुलाई समेत निकै ठूलो राहत समेत मिलेको छ । नेपालमा विगतमा आफू खेलकुद क्षेत्रमा संलग्न रही अघी बढ्ने क्रममा भने निकै नै समस्या रहेको र सङघर्षपुर्वक आफ्नो यात्रा अघी बढाएको नेपाल बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा फुटबलको सम्भावना ः
नेपालमा फुटबलको सम्भावना निकै राम्रो छ । नेपालमा यस क्षेत्रमा प्रयाप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक रुपमा यो क्षेत्र कसरी अघी बढ्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको नीतिमा समेत भर पर्छ । अहिले पनि नेपालको खेलकुद परिषद् समेत जुन रुपपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो, त्यो रुपमा जिम्मेवार हुन सकेको छैन । खेलकुद क्षेत्रको विकासको निम्ति राज्य पक्ष समेत सतर्क बन्न नसकेको कारण विभिन्न खेलकुदहरुमा नेपालबाट अन्य देशहरुमा खेलको निम्ति जाने खेलाडीहरु सहभागि गराउने क्रममा समेत नेपाल सरकारबाटै विभिन्न बाधाव्यवधान सृजना भएको अवस्था छ । जसले गर्दा खेलकुद क्षेत्रबाट राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । साथै नेपालमा खेलकुदको सम्भावना निकै राम्रो हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रलाई जुन रुपमा अघी लैजानुपर्ने थियो, त्यसरी अघी बढाउन सकिएको छैन ? नेपा लमा हामीले देखेका छौं कि एन्फाको कारण लाखौं खर्च गरेर तयारी गरेका टीमहरु समेत विदेशमा खेल्नको निम्ति जाने अवस्था नमिलेको समेत छ ।
खेलकुदकाे पुर्वाधार विकासमा जोड दिनु आवश्यक ः
नेपालमा अहिले सम्म खेलकुद क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका कामहरु समेत राम्रो किसिमले हुन सकेका छैनन् । नेपालमा पहिले नै एन्फा मातहत झापा, धरान लगायतमा स्टेडियमहरु बन्ने काम शुरु भएको भएपनि पछिल्लो समय भने नेपालमा एन्फाकै आन्तरिक विवादको कारण यस क्षेत्रले खासै गति लिन सकेको छैन । नेपालमा खेलकुदको पूर्वाधार विकासको निम्ति प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरता रहेको कारण यस क्षेत्रले राम्रो गति लिन सकेको छैन ।